Abuuritaanka Goobo Cusub: Kernza Sheeko
Inkasta oo webiga Mississippi uu socdo qiyaastii 40 mayl galbeed oo ka mid ah beerta Robert Woodyff ee xerada Modesto, Illinois, wuxuu wali ka fekerayaa saameynta uu ku yeelanayo go'aannadiisa beeraha.
"Waxaan halkan u joognaa inaan kor u qaadno cunto caafimaad leh. Ka hor intaanad sidaa samayn, waxaad u baahan tahay ciidda caafimaad leh iyo biyo caafimaad leh, "ayuu yidhi Woodruff. "Dhammaan waa la isku xiray."
Iyadoo ku xiran jadwalka wareegga, Woodruff dhirta, galleyda, ama qamadida 150-hektar. Laga soo bilaabo Nebraska ilaa Ohio, hadhuudh iyo gallo ayaa ku sifooba dhulalka beeraha. Dalagyada sanadlaha ahi waxay si adag u adag yihiin ciidda, qayb ahaan sababtoo ah waxay bixiyaan daboolka dhulka xagaaga iyo dhacdada oo keliya. Roobabka guga waxay dhalin karaan nabaadiino ba'an iyo neefta qashinka ah sababtoo ah dhulka aan la daboolin. Laakiin hadda Woodruff waxay ku darey dalag cusub, oo loo yaqaan Kernza®, taas oo u suurtogal ah in ay si wayn u sii waaraan beeraha.
Woody Woodruff kormeerkiisa beeraha Modesto.
"Haddii aad ka fekerto muuqaalka dhulkeena ah, dhoobka dilka ah ee sidan oo kale ah waxay noqon kartaa bedelaha bedbaadaha dhabta ah."
-AARON RESER, KORONTADA KOOXAHA CIYAARIYADA, CALAAMADAHA BALLAHA DHAGAYSIGA
Xagga sare, Kernza waa wax badan oo la mid ah qamadiga - cawska, oo leh kernel macaan, nafaqo leh. Laakiin dhulka hoose, farqiga waa habeen iyo maalin. Si ka duwan sida sarreenka ama dalagyada kale ee sanadlaha ah sida hadhuudhka iyo digirta, Kernza waa hal sano. Marka la beeray, waxay sii socotaa sannadka sanadka ka dib, kobcinta nidaam xidid oo ku socda 10 cagood oo dhulka hoostiisa ah, qaboojinta dhirta, nafaqooyinka, iyo sunta kale ee faddaroobaya biyaha iyo dushiisa. Xayiraadda ayaa sidoo kale waxay caawisaa in la yareeyo qiiqa kaarboon dioxide iyaga oo ilaalinaya qashinka qoto dheer ee ciidda.
"Deegaan ahaan, waxay noqon kartaa xalka dhibaatooyin badan oo aan wajaheyno nidaamyadayada sannadlaha ah ee soo socda," ayuu yiri Woodruff. "Taasi waa qiimaha aniga."
Midho cusub waxay bixisaa Fursadaha Cusub ee Nadiifinta Biyaha, Cuntada Caafimaadka leh
Kernza waa mid ka mid ah oo kaliya caanaha dalagyada miraha cusub ee la soo saarey dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Waa wax soo saarkeyaal ah sannad-guurinta taranka Machadka Dhulka, oo ah xarun cilmi baaris oo madaxbannaan, saldhig cilmi baaris ah Salina, Kansas. Machadka Dhulka, deeq bixiyaha McKnight ee dhowaan, wuxuu ku talinaynaa inuu soo saaro dalagyo dalagyo qoyan leh oo laga yaabo in lagu beeray isku dhafan si loo jaangoyno jilicsan. Haddii dadaalku uu ku guuleysto, Midwest beeruhu wuxuu quudin karaa macaamiisha halka ay dhalinayso biyo nadiif ah iyo ciid caafimaad leh. Hadda, Kernza waa ganacsiga kaliya ee la sii daayo, machadka iyo la-hawlgalayaasheeda waxay sii wadayaan inay horumariyaan ayna soo saaraan dalagyada si ay u horumariyaan beeraha casriga ah. Taas macnaheedu waa kobcinta wax-soo-saarka, kordhinta qiyaasta abuurka, iyo korniinka Kernza ee iska caabinta cudurka.
Machadka McKnight wuxuu arkayaa muhiimada ay leedahay hadhuudhkan cusub. Sannadka 2016, McKnight's Barnaamijka River Mississippi wuxuu sameeyay deeqo taxane ah oo lagu xirayo Fiisooyinka iyo beerista Dhamaan Dhulka ee ka shaqeynaya inay keenaan suuqa Kernza. Tallaabadani waxay qayb ka tahay habka Istaraatijiyadeed ee Aasaasiga ah ee ilaalinta caafimaadka Wabiga Mississippi iyadoo gacan ka geysaneysa dadaallada hoos u dhigta wasaqda biyaha iyada oo loo marayo dhaqannada beeraha oo la wanaajiyey.
"Haddii aad ka fekerto muuqaalkayaga cirifka ah, geedka dilka ah ee sidan oo kale ah waxay noqon kartaa bedelaha bedbaadada dhabta ah," ayuu yiri Aaron Reser, oo ah isuduwaha hormarinta biyaha ee loogu talagalay Green Lands Blue Waters, waa urur beeraha oo joogto ah oo fadhigiisu yahay Jaamacadda Minnesota. Inkasta oo beeralaydu ay kobciyaan qajaar dhexdhexaad ah muddo tobanaan sano ah oo Maraykan ah ayna u adeegsan jireen sidii xooluhu u quudin lahaayeen, saynisyahannadu waxay hadda kobcinayaan noocyo cusub si ay u daboolaan baahiyo kala duwan. Qalabayn kasta, Fiisooyinka waxay kudhow yihiin in ay abuuraan dalag ah oo loo isticmaali karo waxyaabaha sida biirka, keega, iyo baastada, iyo weliba intaa ka sii muhiimsan, sii badiyo deegaannada pollinator iyo hagaajinta tayada biyaha.
Baastada ku saleysan Kernza ee ay abuureen Dumpling & Strand.
Soo-jeedinta beeralayda si ay u abuuraan calaamado dabiici ah oo dheeraad ah
Sannadkii hore, taageerada McKnight waxay u oggolaatay kooxda Green Lands Blue Waters inay soo ururiso jawaab celin kusaabsan hadhuudhka maskaxda ee beeralayda iyo cuntooyinka, oo ay ka mid yihiin Cuntada Weyn, San Francisco San Francisco oo kibis la dubtay Kernza, Strand, ganacsiyada Twin Cities oo abuuray baasto ku salaysan Kernza. Si loo soo saaro miraha beeraha guud ahaan, saynisyahanno ka tirsan Machadka Dhulku waxay ku tiirsan yihiin daraasiin beeraley ah oo ku nool beeraleyda si ay u tijaabiyaan hadhuudhka ayna horumariyaan dhaqannada ugu wanaagsan ee ay ku koraan.
"Beeraleydu waxay leeyihiin rabitaan qotodheer si ay uga mid noqdaan xalka." -AARON RESER, WAXYAALAHA BEDELSIGA DHAGAYSIGA
Carmen Fernholz, oo ah beeraleyda dabiiciga ah ee ku nool galbeedka Minnesota, ayaa tijaabiyay isweydaarsigii ugu horreeyay ee hadhuudhka dhawr sano ka hor, waxana uu diyaar u yahay inuu abuuro jiilkii ugu danbeeyay marxaladda soo socota. "Waxaa farxad u ah beeralayda, sababtoo ah tani waa dakhliyo leh awood dhaqaale dhab ah."
Sanadka 2016-ka, Machadka Dhulku wuxuu arkey guul weyn marka General Mills ay ku dhawaaqeen in ay iibsan lahaayeen Kernza® si ay beeraha ugu oggolaadaan in ay ku beeraan goobo ganacsi. Shirkadda ayaa sidoo kale xiiseyneysa inay ku darto qayb ka mid ah maaddooyinka fudud iyo cayayaanka.
"Markaad ka hadlayso beeraha, tayada biyaha iyo isbeddelka cimilada, beeralayda ayaa badanaa lagu eedeeyaa," ayuu yiri Raser, isaga oo sheegay in wicitaanada ay ka heshay beeralaydu ay doonayaan in ay tijaabiyaan dalagyada ay muujiyaan rabitaankooda qoto dheer ee ah inay ka mid noqdaan xalka. "Kernza waxay noqon kartaa mid hal abuur leh si loo abuuro muuqaal dabiici ah oo dabiiciga ah, oo ay isu keenaan dadka aan marnaba hore u ahaan karin miiska isku midka ah."